I-Salty, i-Sandy Kailua Sea Shores, kunye nokunye okuninzi - I-Airbnb
I-Salty, i-Sandy Kailua Sea Shores, kunye nokunye okuninzi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguChristie
Le ndlu inevaranda entle engaselwandle ekwimizuzu eyi-5 ukuya kweyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukuya kwiKailua Beach edumileyo ehlabathini. Mamela izandi zamaza ebusuku njengoko uphumle emva kosuku lwakho lolwandle olumnandi. Isitudiyo sikhanya ibe sicocekile ibe sinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ikhitshi elincinci elipheleleyo, ibhedi enkulu etofotofo, igumbi lokuhlambela elicocekileyo nendawo yokungena enomnyango ophumela ngaphandle.
I-Kailua yintsapho ekhethekileyo enamalwandle amahle, iivenkile zokutyela ezintle, iivenkile ze-boutique kunye nendawo epholileyo.
Siyicoce kakuhle indawo emva kokuhlala ngakunye!
Sikwindawo efanelekileyo! Ngoba? Kuba iKailua itsala izigidi zabantu ngonyaka ibe kunzima ukupaka! Akuyomfuneko ukuba uye elunxwemeni okanye kwiivenkile ukuba awufuni! Sisitrato esinye ukusuka kwindlela eya eKailua Beach! Sisekude ngebhayisekile, nge-windsurfing kunye nokuqesha ngephenyane. Siyindawo yokutyela, iivenkile ezintle zokuthenga kunye neevenkile zokutyela. Simalunga nemizuzu eyi-25 sihamba ngemoto ukuya eWaikiki, imizuzu eyi-50 ukuya eNorth Shore kodwa imizuzu nje embalwa sihamba ngeenyawo ukuya kolunye lwamalwandle amahle ehlabathini ngaphandle kweengxaki zokupaka. Le ndawo inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kunye nefeni esesilingini. Ikhitshi linomatshini wokufraya umoya, umatshini wokwenza ikofu, i-microwave, i-toaster oven, ifriji neembiza neepani. Istudiyo sidityaniswe nekhaya lethu kwaye siyintsapho kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuba singathi cwaka. Kodwa nceda ungalibali oku ukuba ufuna indawo ethe cwaka. Umatshini wokuhlamba nowokomisa simahla weendwendwe.
Iirhafu ze-14.75% ze-NG kunye ne-TAT ziqukiwe kwimali yosuku.
Iindleko ziquka irhafu.
TA-121-269-9684-01R GE-121-269-9684-01 $ 65.00 imali yokucoca
Nceda ubuze nayiphi na imibuzo.
4.90 · Izimvo eziyi-154
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi154
Sikwindawo entle yaseKailua. Ungahamba esitratweni ukuya kwihlabathi elidumileyo laseKailua Beach. I-Lantai Beach ikumgama ongaphantsi kweemayile ezimbini. Ungahamba ngeenyawo uze ube phakathi kweKailua kunye neevenkile zokutyela, iivenkile zokutyela kunye neebhari.
Umbuki zindwendwe ngu- Christie
Ndizalelwe ndaza ndakhulela eKailua ibe ndinganceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba nayo. Nceda ungoyiki ukubuza ukuba unemibuzo! Kodwa ndiza kukushiyela kwindawo yakho ngaphandle kokuba ndicele amacebiso.
Inombolo yomthetho: 430260340000, TA-121-269-9648-01
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kailua